Kubaluleke kakhulu ukuthi ungayisebenzisi kahle kuphela, kodwa futhi ukwazi ukuthi ususe kanjani izimonyo kahle. Uzoqala kuphi? Yiziphi izindlela ezisetshenziswa kakhulu: i-tonic, ubisi noma i-mousse? Ungakhetha kanjani amadiski adibeneyo namadampu ukususa izimonyo? Mayelana nalokhu nezinye izinto eziningi ongafunda kulesi sihloko.
Kunconywa ukususa izimonyo ngezigaba ezintathu. Isigaba esisodwa. Okokuqala udinga ukususa izimonyo ezindebe zakho. Ukwenza lokhu, sebenzisa inani elincane le-ejenti ekhethekile emgqeni wekotini bese ususa ngokucophelela umlomo wezintambo kusuka emaceleni ezindebe kuya phakathi.
Isigaba ezimbili. Okwesibili, izimonyo zisuswa emehlweni. Uma amajwabu amehlo eboshiwe, ke ususe kuqala. Ehambelana nethuluzi elikhethekile lokususa izimonyo emehlweni enkinga yesikotini ngokucophelela ugibe ijwabu leso eliphezulu, kusukela ekhaleni ukuya ethempelini. I-mascara kufanele isuswe ekuqondeni kusuka ezimpandeni ze-eyelashes kuya amathiphu. Qaphela ukuthi ungayitholi umkhiqizo ebusweni lomsindo we-iso! Uma usebenzisa i-ukotini efihlekile ukuze ususe izimonyo, khona-ke kufanele ahlanze inkinozi ngokunyakaza okufanayo owawufake isicelo.
Isigaba sesithathu. Ukususwa ebusweni be-tone enkulu - i-powder noma isisekelo. Kunezindlela ezimbili zalokhu: uma ujwayele ukususa ama-makeup ngamanzi, kungcono ukuthi usebenzise i-foam, i-mousse noma i-gel. Uma ususa izimonyo "ngendlela eyomile", uzodinga ubisi obengeziwe. Khumbula ukuthi ubisi kumele luqale ukusakazwa ebusweni bonke, bese ulususa nge-disc noma nge-napkin.
Manje ake sikhulume kancane mayelana nezindlela zokususa izimonyo. Eqenjini elihlukile, ama-mousses, ama-foam nama-gel ayedwa, ngoba adinga ukugezwa ngamanzi. Ubisi luhloselwe ukususa izimonyo ngaphandle kwamanzi. Ama-gel, ama-mousses nama-foam ahloswe ngesikhumba samafutha noma inhlanganisela, kanti ubisi lumile. Futhi ukuze ususe izimonyo kusuka esikhumba esibucayi kungcono ukusebenzisa i-lotion.
Kubuye kubaluleke kakhulu ukukhetha izintambo zokwenza kahle kanye noboya bekotini ukuze ususe izimonyo. Okokuqala, khetha imikhiqizo evela ku-100% ukotini kuphela, ngoba izintambo zemvelo zithola umswakama ongcono. Okwesibili, qaphela ukuthi amasondo nezinduku zekotini azigcini nge-chlorine, ngoba ingabangela ukucasula isikhumba. Okwesithathu, imikhiqizo oyikhethayo kufanele ibe nebushelelezi: izinwele ezihlukana nazo zingangena emehlweni. Futhi, ekugcineni, lapho ukhetha uhla lwekotini, qiniseka ukuthi uboya bekotini buqinile kuze kube sekugcineni, mhlawumbe ngaphandle kweglue, okungase kubangele ukusabela okweqile.
Uma ufunda ukukhipha kahle izimonyo, ngenkathi usebenzisa izindlela ezifanele, isikhumba sakho sizohlala sikhangayo futhi sisencane isikhathi eside!
Izinyoni zepharadesi: Izifundo zokwenza amaNdiya
Izithelo zasehlobo: iqoqo elimangalisayo le-makeup Essence x Chupa Chups
Ukuhlanzeka okuseduze nokuhlanzeka okunempilo
Ukukhulelwa kwesibili kanjani?
Salsola nge-ham ne-brisket
Ngakho ngenza ukwakha isiFulentshi: umphumela uyamangalisa
Umntwana uphupha amaphupho amabi
Izakhiwo kanye nokusetshenziswa kwamafutha abalulekile we-nutmeg
Amakhukhi on ukhilimu omuncu
Inkontileka yomsebenzi yesisebenzi nomqashi
UKonstantin Meladze wakhuluma ngokuhlulela ngokungathembeki ekukhethweni kwe-Eurovision 2016
Ububele obunzima: i-Crochet ye-snowflakes ekhonjiwe